DeltaFosB - နျူကလိယအငြင်းပွားမှုအတွင်းလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များအတွက်မော်လီကျူးဂိတ်လား။ (2006) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 15 နိုဝင်ဘာလ 2006, 26(46): 11809-11810; Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4135-06.2006
1စမ်းသပ်စိတ်ပညာဌာန, ကင်းဘရစ်, ကိန်းဘရစ် CB2 3EB, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တက္ကသိုလ်နှင့်
2Laboratoire က de ဇီဝကမ္မဗေဒ et Physiopathologie de la Signalisation Cellulaire, United Mixte က de Recherche 5543, Universitéဗစ်တာ Segalen ဘော်ဒိုး 2, 33076 ဘော်ဒိုး Cedex, ပြင်သစ်
အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (NAc) ရှည်လျား limbic နှင့်မော်တာစနစ်များ (အကြား Interface ကိုအဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်Mogenson et al ။ , 1980) ထိုသို့သောပု pallidum အဖြစ်မော်တာထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်အဆောက်အဦမှထိုသို့သော prefrontal cortex အဖြစ်အများအပြား limbic cortical အဆောက်အဦမှက၎င်း၏ convergence glutamatergic သွင်းအားစုများနှင့်ယင်း၏အကျိုးရလဒ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာ။ အဆိုပါ NAc လည်းဆုလာဘ်-related လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စွဲလမ်းထဲမှာရငျးနှီးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း mesolimbic လမ်းကြောင်းမှတဆင့် ventral tegmental ဧရိယာကနေအဓိက dopaminergic innervation လက်ခံ၏။ အဆိုပါ NAc အတွင်းမှာပဲ dopaminergic နှင့် glutamatergic သွင်းအားစုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆာပအပြုအမူ (တုံ့ပြန်မှု-ရလဒ်ကိုဖြစ်စဉ်များ) အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ် (အစားအစာ, ရေ, လိင်) သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများကမောင်းထုတ်, သူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်သောအခြေအနေများလှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်အပြန်အလှန်ပေလိမ့်မည်။
ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုစွဲနှင့်အတူဆက်စပ်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအထောက်အကူပြုဖို့စဉ်းစားနေကြသော NAc အတွင်းကြာရှည်ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်များထဲတွင်သည် dynorphin-အပြုသဘောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွင်းကူးယူအချက်ΔFosB၏ induction အဓိကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ΔFosBစွဲဖို့အကူးအပြောင်းနှင့်အတူဆက်စပ်ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုပြပထမဦးဆုံးကြာရှည်မှတ်တမ်းထိန်းညှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာကကိုကင်းများ၏အကြိုးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု modulates နှင့် opiates ၏သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့အထိ, နည်းနည်းသဘာဝကဆုလာဘ်များကလှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏မော်ဂျူအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုလူသိများခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့မကြာသေးမီကထုတ်ဝေ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, Olausson et al ။ လှပသော, အသီးသီးΔFosB၏ overexpression potentiates နှင့်တိုးသည်ဆာအေးစက်၏ဝယ်ယူခြင်း, ရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှု, အစားအစာနှစ်မျိုးလုံးကိုသရုပ်ပြဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်း။
Olausson et al ။ food- အတွက်အစားအစာလုံးလေးများများအတွက်နှိပ်လီဗာ၏ဝယ်ယူအပေါ် 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), နှင့်စိတ်ကြွဆေး - ကင်း, နီကိုတင်း, (+): ပထမဦးဆုံးထပ်ခါတလဲလဲထိုး၏, ΔFosBသွေးဆောင်သိအခြေအနေများအောက်တွင်ငါးကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် ဆုံးရှုံးကြွက်များ။ MDMA မှလွဲ. အမူအကျင့်ာင်းအပေါင်းတို့နှင့်သွေးဆောင်အားလုံး pretreatments [ဆာအေးစက်နေစဉ်အတွင်းကြွက်များကထုတ်လွှတ်တက်ကြွလီဗာပုံနှိပျ၏နံပါတ်နှစ်ဦးစလုံးတိုးလာOlausson et al ။ (2006)သူတို့၏ သဖန်းသီး။ 1 (http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/26/36/9196/F1)] နှင့်တစ်ဦးတိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားတခုတခုအပေါ်မှာတိုးမြှင့်ကြေကွဲအမှတ် (PR စနစ်) ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အစားအစာရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှု [Olausson et al ။ (2006), သ။ 2B (http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/26/36/9196/F2)] ။ ထို့ကြောင့် NAc အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်လူသိများနေတဲ့ကုသမှုစားစရာဘို့တုံ့ပြန်ဆာပတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ Olausson et al ။ ထို့နောက်ΔFosB၏ NAc စကားရပ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားတစ်ဦးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသရုပ်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဤသူတို့ NAc အတွက်ΔFosB၏အတု induction နှစ်ခုမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ doxycycline (TA ကမကထလှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်သောမော်လီကျူး switch ကို) ဖယ်ရှားသည့်အခါသူတို့ကပထမဦးဆုံးသာ striatal ရှုပ်ထွေးသော၏ dynorphin-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက်ပရိုတိန်း overexpress ရာ Transgene NSE-tTA-TetOP-ΔFosBကြွက်လေ့လာ (သဖန်းသီး။ 1A) ။ ဤကြွက်ဟာ NAc အတွက်ဒါပေမယ့်လည်းသင်ယူအလေ့အထပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်သော dorsal striatum, (မသာΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုယဉ် et al ။ , 2004တန်ဖိုးဆုချမှအာရုံမခံစားနိုင်သောအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ) (ဆိုလိုသည်မှာအလိုအလျောက်နှိုးဆွ-တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ) ။ စာရေးသူအရှင်ကြွက်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းသုံးပြီး NAc ၏အဓိကအတွက်ΔFosB၏တိကျသော overexpression သွေးဆောင်။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင်ΔFosB၏အတုစကားရပ် [တုံ့ပြန်ဆာ၏ဝယ်ယူနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှု mimickedOlausson et al ။ (2006)သူတို့၏သင်္ဘောသဖန်းသီး။3(http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/26/36/9196/F3) နှင့်5(http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/26/36/9196/F5)] နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု [Olausson et al ။ (2006)သူတို့၏သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4A (http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/26/36/9196/F4) နှင့်7(http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/26/36/9196/F7)] (သဖန်းသီး။ 1B) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အောက်မှာအစားအစာရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါဘူး ကြော်ငြာ libitum အဆိုပါ NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံအပေါ်မူတည်မှပြသခဲ့ပြီးသောလေ့လာ phenotype တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးအမူအကျင့်စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှသာထင်ရှားကြောင်းအကြံပြုအခြေအနေများ,, (Salamone et al ။ , 1994).
dopamine ၏ Gates အယူအဆများအတွက်အသိအမြင်အသစ်: အနျူကလိယအတွက်ΔFosB၏ Overexpression ဆာပကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်စားစရာဘို့တုံ့ပြန်တိုး accumbens? A, စမ်းသပ်မော်ဒယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များ (လက်ဝဲ) LacZ-cDNA ်ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူထိုးသွင်း doxycycline (Dox) သို့မဟုတ်ကြွက်ပေးထား bitransgenic NSE-tTA-TetOP-ΔFosBကြွက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးΔFosBဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ ကြွက်ΔFosB -cDNA ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်အတူ NAc ၏အဓိကများတွင်ထိုးသွင်းသော်လည်းညာဘက်, doxycycline ထံမှဆုံးရှုံး Bitransgenic NSE-tTA-TetOP-ΔFosBကြွက်, အ striatal ရှုပ်ထွေးအတွက်ΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအထူးသΔFosBထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Bရလဒ်၏, အကျဉ်းချုပ်။ တစ်ဦးဆာအေးစက် (IC) (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားအစာရရှိရန်တစ်လီဗာကိုနှိပ်) ဆည်းပူးတစ်ခုသို့မဟုတ် PR စနစ်အတွင်းမှာမှစိန်ခေါ်သည့်အခါΔFosB overexpressing တိရိစ္ဆာန်များထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တုံ့ပြန်တစ်ခုတိုးလာဆာပပြသ။ အမှတ် Breaking ကို BP ။ C, သီအိုရီရှုထောင့်။ သာမန်အခြေအနေများ (လက်ဝဲ) လက်အောက်တွင်အကျိုးကိုရရှိရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရတိရစ္ဆာန်အားဖြင့်ပြသအပြုအမူသည်၎င်း၏အရေးယူမှုနှင့်ရလဒ်ကိုအကြားအရေးပေါ်နှင့်အကျိုးကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ NAc အတွင်းမှာပဲ dopamine သည့်စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုရန်သင့်လျော်သောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုအရာမှတဆင့်တစ်ဦး functional ဖြစ်စေ window ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ΔFosB (ညာ) overexpressed သောအခါ, ဒီဝင်းဒိုးကိုကျယ်လာပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်း, ဤတူညီသောစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအားကောင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင်ကြွက်နှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တုံ့ပြန် instrumental သာတက်ကြွစွာ manipulandum ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်ကြောင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာသက်ရောက်မှုတိုးလာ nonspecific လုပ်ဆောင်မှုတွေကပေါ်ကနေကြဘူး။ ထို့အပြင်ထိုသို့တိုးမြှင့်ဆာနှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာတုံ့ပြန်ဖွယ်မရှိကြောင်း PR စနစ်အတွက်ΔFosB overexpressing Transgene ကြွက်နေဖြင့်ပြသထားသောရမှတ်မွတ်မပြေနိုင်သော-သွေးဆောင်စစ်ကူတန်ဖိုးမှအထိခိုက်မခံခဲ့ကြ (1) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ΔFosB-သွေးဆောင်အလေ့အထသင်ယူမှုဖို့တွေကပေါ်ကနေကြီးနှင့် (2) ကြွက်များတွင်ΔFosB၏ overexpression အရှင်အတု overexpression နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအကြားမည်သည့်အပြန်အလှန်တားဆီး, ဆာပလေ့ကျင့်ရေးနောက်တော်သို့လိုက်လျှင်ပင်, တကနောက်ဆက်တွဲ PR စနစ်စဉ်အတွင်းအစားအစာရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဤရလဒ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာ (ထို NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression တုံ့ပြန်ဆာပပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါးကြောင်းပြသသဖန်းသီး။ 1B) ။ ΔFosBအရှင်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်များ၏မော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အထွေထွေမော်လီကျူး switch ကိုဖြစ်အကြံပြုသည်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲအကျိုးဆက်အပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့မေးခွန်းများကိုအကြံပြုပေးသောဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များ၏နားလည်မှုအတွက်သော့ချက်ဒြပ်စင်, ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။
Olausson et al ၏ရလဒ်များကို။ noncontingent စမ်းသပ်-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏မူးယစ်ဆေးထိုးသို့မဟုတ်အတု overexpression ဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction အပေါ်အခြေခံပြီး, သာအစားအစာဆီသို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းအရှင် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အခြေအနေတွင်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖြေရှင်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ စွဲဖွံ့ဖြိုးလာသောအခါအစာအာဟာရများကဲ့သို့သဘာဝကဆုလာဘ်လျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်သော်လည်းအမှန်စင်စစ်, compulsive အပြုအမူ, မူးယစ်ဆေးဆီသို့သီးသန့်ညွှန်ကြားနေသည်။ ဒါဟာအရှင် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြီးနောက်, ဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ပါလိမ့်မယ်Vanderschuren နှင့် Everitt, 2005), ΔFosBအဆိုပါ NAc တွင်သို့မဟုတ်အလေ့အထ-based တရားရှိဖို့အပြုအမူတွေအတွက်ကြောင့်သဘာဝအဆုလာဘ်များအတွက်ပိုကောင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်ရှိမရှိပါဝင် striatum ပို dorsal အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သွေးဆောင်နေသည်ရှိမရှိ။ အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါတစ်ဦးကစက္ကန့်ယူဆချက် (ကွဲပြားခြားနားသော NAc အာရုံခံ subpopulations operating အပြုအမူစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်မှအထူးကိုတုံ့ပြန်သောဆန္ဒပြပွဲအပေါ်မှီခိုCarelli et al ။ , 2000) ။ က noncontingent စမ်းသပ်-ကိုအပ်ထိုးသို့မဟုတ်ΔFosB၏အတု overexpression ဒီဆုလာဘ်-တိကျတဲ့အာရုံခံတုန့်ပြန်များအတွက်အကောင့်နိုငျကွောငျးမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်သောကြောင့်, ΔFosB၏ကွန်ရက်တိကျတဲ့စကားရပ်လည်းစီးပွားဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပါလိမ့်မယ်။ တာရှညျမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေးဝါးများဘို့စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေဟာ NAc ခွဲများအဖြစ်အတွက်ΔFosB၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော induction နှင့်ဆက်စပ်လျှင်အမှန်စင်စစ်, အစားအစာနှင့်တူသည့်သဘာဝဆုလာဘ်၏အကြိုးပမူးယစ်ဆေးအဘို့နှင့်သာမူးယစ်ဆေးတစ်ခုတိုးမြှင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု, မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ပစ္စုပ္ပန်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရလာဒ်များအပေါ်အခြေခံပြီး, ကနာတာရှည် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အခြေခံ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏လက်ရှိတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များသုံးစွဲဖို့ယခုကအရေးကြီးတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အတော်လေး (စွဲအတွက် devalued ခံရဖို့ပေါ်လာကြောင်းသဘာဝကဆုလာဘ်များရှာ၏အကြိုးပ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့အပိုဆောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိစေခြင်းငှါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် IVR) ။
တစ်ဦးထက်ပိုသောသီအိုရီအဆင့်မှာအဲဒီရလဒ်တွေကို (dopamine function ကိုတံခါးဝအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီများမှာတော်ကကျေးဇူး, 2000) ။ ဒါဟာ (ထို NAc အတွင်း, ΔFosBအဓိကလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုတုံ့ပြန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအမူအကျင့်ကို output ၏ dopamine အားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုများ functional ဖြစ်စေ window ကိုကယျြဝနျးစခွေငျးငှါ, ထိုအဆိုပြုနိုင်ပါသည်သဖန်းသီး။ 1C) ။ ဒါဟာအရှင်ΔFosBသူတွေဟာ overexpressed အခါပင်မြင့်မားမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုမရှိဘဲ, တူညီတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်နိုင်ကြောင်းစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။
Received စက်တင်ဘာလ 21, 2006 ။
တည်းဖြတ်မူလက်ခံရရှိ စက်တင်ဘာလ 28, 2006 ။
ဤလုပ်ငန်းအသီးသီး AR နှင့် DB မှဒေသဆိုင်ရာ Aquitaine-Center ကအမျိုးသား de la Recherche Scientifique နှင့် Fyssen ဖောင်ဒေးရှင်းမှထောက်ပံ့ငွေများကထောက်ခံခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာ၏မှတ်စု - မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစာတမ်း၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ ဂျာနယ်, ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ်ပါရဂူအပေါင်းအဘော်တို့ကသီးသန့်ရေးသားသင့်ကိုယ်ပိုင်ဌာနများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်တည်ရှိသောဂျာနယ်ကလပ်တူတဲ့ရန်ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။ ဂျာနယ်ကလပ်၏ပုံစံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကတွေ့ကျေးဇူးပြုပြီး http://www.jneurosci.org/misc/ifa_features.shtml.
စာပေးစာယူဒါဝိဒ်သည်ဘီးလင်းမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်, စမ်းသပ်စိတ်ပညာဌာန, ကင်းဘရစ်, ဒေါင်းနင်းလမ်း၏တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ် CB2 3EB, ဗြိတိန်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2006-0270 / 6474 / 06-2611809 $ 02 / 15.00 များအတွက်မူပိုင်ခွင့်©0Society က
(2000) နျူကလီးယပ်အတွက်သီးခြားအာရုံကြောဆားကစ် "သဘာဝ" (ရေနှင့်အစားအစာ) ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်အန်ကုက်လုပ်ကိုကင်း accumbens ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ. J ကို neuroscience 20:4255-4266.
(2000) အချက်အလက်များကို limbic သည့်စနစ်အတွင်းစီးဆင်းမှုနှင့် schizophrenia များ၏ pathophysiology ၏ Gates. ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 31:330-341.
(1980) အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် limbic သည့်စနစ်အကြား Interface ကိုနှင့်မော်တာစနစ်က: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ. prog Neurobiol 14:69-97.
(2006) နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ΔFosBအစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ. J ကို neuroscience 26:9196-9204.
(1994) နျူကလိယအစားအစာမဟုတ်အခမဲ့အစားအစာစားသုံးမှုအဘို့အနှိပ်ဆာလီဗာစဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုး accumbens. Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 49:25-31.
(2005) compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ. EUR J ကို Pharmacol 526:77-88.
(2004) dorsolateral striatum ၏တွေ့ရှိရပါသည်ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းကိုထိန်းသိမ်းပေမယ့်ဆာပသင်ယူမှုအတွက်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်. EUR J ကို neuroscience 19:181-189.
ဆောင်းပါးများ - အမူအကျင့် / စနစ်များ / သိမြင်မှု:
နှင့် ဂျိန်း R. တေလာ
နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက်ΔFosBအစားအစာစစ်ကူတူရိယာဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် Motivation ထိန်းညှိ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်,6စက်တင်ဘာလ 2006, 26(36):9196-9204; Doi:10.1523 / JNEUROSCI.1124-06.2006